Shacab kasoo barakacay Alshabaab oo soo gaaray Cadaado - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Shacab kasoo barakacay Alshabaab oo soo gaaray Cadaado
April 2, 2018 admin567
Waxaa saacadihii ugu dambeeyey Magaalooyinka Cadaado, Baxdo iyo Xinlabi soo gaaray shacab kasoo barakacay deegaano hoos taga degmada Xarardheere. dadkaan ayaa u badan dhalinyaro ka soo cararay Alshabaab.
Ururka Alshabaab oo maamula degmada Xarardheere iyo deegaanada hoostaga ayaa Beesha Saleebaan ku amray in ay keenaan 240 dhalinyaro askar laga dhigo, arinkaas oo ay ka biyo diideen. arintaas oo keentay in dadku ka barakacaan deegaanada ay alshabaab maamulaan.
Alshabaab ayaa sidoo kale diiday in gaadiidku qaado dadka barakacaya, iyagoo ugu hanjabay gaarigii qaada barakacayaasha in ay gubi doonaan. waxaana dadku lugeynayaan masaafo ku dhow 100 km si ay u gaaraan deegaano aysan maamulin alshabaab.
Dadka Qaxa ayaa laga dareemayaa diif iyo daal badan, waxaana ay miciin bideen magaalooyin ay isleeyihiin nolol ayaad ka heli kartaan. sidoo kale dhanka xeebta degmada Xarardheere ayay sidoo kale laga dareemayaa barakaca reer guuraaga oo ka fogaanaya goobaha ay maamulaan shabaabku.
Dowladda oo 1 Milyan oo dollar ugu deeqday gargaarka shacabka Beledweyne
Daawo: Cadaado oo laga dhagax dhigay Xarunta Barlamaanka Galmudug